Ragga Alaab-qeybiyeyaal iyo Warshad - Soosaarayaasha Ragga Shiinaha
Ragga wan / harag harag cashemere galoofyada safafka leh madow madow
Waxaa laga sameeyay harag adhi Itoobiyaan ah, oo leh maqaar dhogor ah, Qaab dhismeedka caadiga ah ayaa ku habboon munaasabad kasta, laga bilaabo dharka caadiga ah ilaa dharka. Dharka dhogorta leh iyo dahaadhka diirran ee diirran. Cidhiidhiga ayaa laguugu hagaajin karaa adiga cabbirka suunka maqaarka ee gadaasha. Ugu dambeyn hal galoof xilliga qaboobaha.
Ragga wan yar / dhogorta hargaha ah ee galoofyada jiilaalka leh ee badhanka leh
Waxaa laga sameeyay harag adhi Itoobiyaan ah oo leh maqaar dhogor ah, Qaab dhismeedka ayaa ah mid casri ah oo loogu talagalay munaasabad caadi ah. Badhanka ku yaal curcurka ayaa kaa hagaajin kara cidhiidhiga si uu gacanta kuu galo. Jilicsanaanta, dhererka hodanka ah ee maqaarka, moodooyinka ugu dambeeyay iyo farsamada gacanta ugu sarreysa. isku darka ugu fiican! Ma aha oo kaliya inaad diiriso gacmahaaga, sidoo kale aad u qabow!
Ragga wan yar / dhogorta dhogorta ah dhogorta galoofyada jiilaalka ee jaranjarada leh
Gacan gashikan waxaa farsameeyay farsamayaqaanno in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo u leh gacmo gashi gacmo gashi. Qaab dhismeedka caadiga ah ee sannadka badan, sidoo kalena waa sii socon doonaa. taas oo loogu talagalay shaqada, fiidadka, ama dharka maalinlaha ah. Dhar wanaagsan oo xagaaga laga baxo. Gacmahaagu waxay noqon doonaan kuwo diirran oo raaxo leh suufka dhogorta iyo dahaadhka, ee dareemaya sida ugu wanaagsan ee loo xidho sida ay u eg yihiin, isku-darka ugu fiican! qabow!
Ragga dharka dhogorta dhogorta leh galoofyada jiilaalka ee jaranjarada leh
Gacan-galkaani waxaa gacanta ku gooyay farsamayaqaanno khibrad u leh in ka badan 10 sano. taas oo loogu talagalay shaqada, fiidadka, ama dharka maalinlaha ah. Dhar wanaagsan oo xagaaga laga baxo. Gacmahaagu waxay noqon doonaan kuwo diirran oo raaxo leh suufka dhogorta iyo dahaadhka, ee dareemaya sida ugu wanaagsan ee loo xidho sida ay u eg yihiin, isku-darka ugu fiican! qabow!
Ragga wanka / ido ayaa suute maqaar dhogor gashiga jiilaalka leh
Ka samaysan maqaarka idaha Itoobiya ee dhabarka iyo timirta maqaarka, Deerskin waa kuwo adag oo waara, hawo wanaagsan oo hawo leh, ayaa ku neefsan kara gacmahaaga. Isku dhafka labada, iyo moodooyinka ugu dambeeya, farsamo-yaqaanada ugu sarreeya. isku darka ugu fiican! Ma aha oo kaliya inaad diiriso gacmahaaga, sidoo kale aad u qabow!
Waxaa laga sameeyay harag adhi Itoobiyaan ah, oo leh maqaar dhogor ah, Qaab dhismeedka caadiga ah ayaa ku habboon munaasabad kasta, laga bilaabo dharka caadiga ah ilaa dharka. isku dhafka ugu fiican ee qalabka ugu fiican, moodooyinka ugu dambeeya iyo farsamada gacanta ugu fiican. Mid ka mid ah galoofyada ugu fiican xilliga qaboobaha.
Ragga wan yar / dhogorta dhogorta ah dhogorta galoofyada jiilaalka ee safafka leh MAALKA CALANKA
Waxay ka samaysan tahay harag adhi Itoobiyaan ah PALM iyo Wool Knitted Fabric Series, isku darka labadooda, iyo qaababkii ugu dambeeyay, farsamo-yaqaankii ugu sarreeyay. Miisaan khafiif ah, raaxo, iyo qurux, isku dhafan oo qumman! Ma aha oo kaliya diiran, sidoo kale aad u qabow!